အဘယ်ကြောင့်ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အခမဲ့အလုပ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဝီဝီတိုတန်မှားယွင်းနေနိုင် | Martech Zone
စနေနေ့, အောက်တိုဘာလ 31, 2015 အင်္ဂါနေ့, နိုဝင်ဘာလ 3, 2015 Douglas Karr
ဒီ post ဟာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုမဟုတ်ပါဘူး။ Wil Wheaton နဲ့သူ့ရဲ့ post ကိုအငြင်းအခုံလုပ်ဖို့ကျွန်တော်မကြိုးစားဘူး။ သင်သည်သင်၏ငှားရမ်းခကိုတစ်မူထူးသောပလက်ဖောင်းဖြင့်မပေးနိူင်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်သို့ရောက်ရှိပါ။ Wil Wheaton သည်သိသိသာသာနောက်လိုက်သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ သူသည်ပရိသတ်နှင့်အသိုင်းအဝိုင်းကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့သည်။
ဝီ Wheaton သည်သူ၏တုံ့ပြန်မှုအတွက်ယဉ်ကျေးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူလည်းလူသိရှင်ကြားလုပ်ဖို့လည်းတောက်ပခဲ့ပါတယ် မကောင်းသော, ခေါင်းပုံဖြတ်အရင်းရှင်စနစ် ဤသည်နေ့ရက်ကာလအပေါငျးတို့သဒေါသဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည် Wil Wheaton မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်လှမ်းမီမှုနှင့်ပရိသတ်ကိုကြီးထွားရန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ HuffPo လိုပရိသတ်ကိုရောက်ရှိဖို့အခွင့်အရေးတွေရှိတယ်။ တကယ်တော့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခု ကြော်ငြာအတွက်ပေးဆပ်မည့်အစားသင်၏စွမ်းရည်အချို့ကိုဖြည့်ဆည်းပေးရန်ဖြစ်သည်။
ပထမဆုံး Huffington Post လို့ခေါ်တဲ့အရင်းရှင်သတ္တ ၀ ါကြီးအကြောင်းဆွေးနွေးကြစို့။ Martech Zone တစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ဂဏန်းနှစ်လုံးတိုးတက်မှုဆက်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကျော်ကြာပြီးနောက်အွန်လိုင်းမှဘလော့ဂ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အေဂျင်စီသို့ဖောက်သည်ကောင်းများကိုဆက်လက်ဆွဲဆောင်နေသည်။ Highbridge။ တိုက်ရိုက် ၀ င်ငွေတိုးတက်မှုသည်ကောင်းသော်လည်းဂျင် (ကျွန်ုပ်၏စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်) နှင့်ကျွန်တော်တို့သည်ထုတ်ဝေမှုအတွက်အမြတ်အစွန်းသို့ ဦး တည်နိုင်သောဝင်ငွေစီးဆင်းမှုကိုထောက်ပံ့ရန်ဘလော့ဂ်တွင်ဆက်လက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်လိုအပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်သိသည်။
ထုတ်ဝေမှုသည်သိသာထင်ရှားသောအမြတ်အစွန်း (အေဂျင်စီလုပ်ငန်းမှလွဲပြီး) သို့ရောက်သောအခါလူတို့သည် guest ည့်သည်စာရေးဆရာများနှင့်တင်သွင်းသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့အားထပ်တူတုံ့ပြန်နိုင်သည်။ audience ည့်သည်တွေဆီကအပတ်တိုင်းတင်ပို့ချက်အတော်များများကိုငါတို့ထုတ်လွှင့်မယ်ဆိုရင်ပရိသတ်တွေကဒီအကြောင်းအရာကနေအကျိုးရမယ်လို့ယုံကြည်တယ်။ ဒီကုမ္ပဏီတွေ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ချင်းကိုကျွန်တော်တို့လျော်ကြေးမပေးဘူး။
ငါတို့ audience ည့်သည်စာရေးဆရာများကို (အခုထိ) မလျော်ကြေးငွေမပေးပါဘူး။ ငါဖတ်ရှုခြင်း၊ ကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်း၊ ပလက်ဖောင်းများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း၊ podcasts လုပ်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုအစီအစဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်ခြင်း၊ စာအုပ်များဖတ်ခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်များကိုတက်ရောက်ခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ဝေမှုကိုထောက်ပံ့သောပလက်ဖောင်းများအတွက်ပေးချေခြင်းတို့တွင်ကျွန်ုပ်၏အချိန်အနည်းဆုံးလေးပုံတစ်ပုံရင်းနှီးမြှုပ်နှံသည်။ အဲ့ဒီအချိန်ကာလကဘာလဲဆိုတာစဉ်းစားဖို့ငါကြောက်တယ်။ သန်းနဲ့ချီတဲ့သူကိုငါတန်ဖိုးထားတယ်။ ငါလည်းအဲဒီရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ငါ့ငှားကိုမပေးနိုင်ဘူး!
Wil Wheaton သည်သူ၏ဘလော့ဂ်ကို Huffington Post နှင့် ပတ်သက်၍ ငှားရမ်းနိုင်ခဲ့သလား။ ငါမယုံဘူး
ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်သည်တန်ဖိုးရှိသည်။ နာရီပေါင်းထောင်ချီပြီးဒေါ်လာထောင်ချီပြီးတိုက်ရိုက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက်ကျနော်တို့အဲဒီငွေပမာဏကိုပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ guest ည့်သည်စာရေးဆရာများအားပေးဆပ်ခြင်းသည်ပရိသတ်များနှင့်သူတို့၏အခွင့်အာဏာကိုတည်ဆောက်ရန်နှင့်စီးပွားရေးအကြောင်းပြချက်များကြောင့်သူတို့နှင့်ထိတွေ့ရန်ဆွဲဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ငါတို့နှင့်အတူကြီးစွာသောအကြောင်းအရာရေးသားရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံကြသူကုမ္ပဏီများသည်သဘောပေါက်ပါပြီ သွယ်ဝိုက် သူတို့အားပို့စ်များကိုမှဝင်ငွေ။ ဒါကြောင့်ဒီအကြောင်းအရာအတွက်ကျွန်တော်မပေးဆပ်သေးပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်ကအဲဒီမှာရှိတယ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ကျော်ကြားမှုနှင့်ကျော်ကြားမှုမရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အာဏာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အွန်လိုင်းသို့ရောက်ရှိရန်ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်းများပြုလုပ်နေသောကျွန်ုပ်တို့အတွက်အခြားသူတစ် ဦး မှ ဆက်လက်၍ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်ပရိသတ်ကိုဆွဲဆောင်ရန်အခွင့်အလမ်းသည်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းဖြစ်သည်။ ငါကလုံးဝအသုံးချခြင်းကိုမယုံဘူး။ အဲဒါကနှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးရှိမယ့်အခွင့်အလမ်းပဲ။ အားသာချက်များကိုညှိနှိုင်းနိုင်တယ်။
အမှန်မှာ Wil Wheaton နှင့်ဆက်သွယ်သော PR ပညာရှင်ကိုပေးရခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကြောင့် HuffPo ဟာသူလိုနာမည်ကြီးတွေကိုငွေထုတ်ပေးတယ်။ မစ္စတာဝီတိုသည်သူအကျိုးအမြတ်ရရှိမည့်သဘောတူစာချုပ်ကိုတိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း၊ သွယ်ဝိုက်သော်လည်းကောင်းညှိနှိုင်းနိုင်ခဲ့လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ နည်းလမ်းအချို့ကိုကြည့်ပါ။
စာအုပ်မြှင့်တင်ရေး - မစ္စတာဝီတိုနီသည်အောင်မြင်သောစာရေးဆရာတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ သူသည် Huffington Post ၏ကျယ်ပြန့်သောပရိသတ်အားဖြင့်သူ့စာအုပ်အားအခမဲ့မြှင့်တင်ရေးကိုညှိနှိုင်းဆွေးနွေးနိုင်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အချို့သောအမျိုးအစားများသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောခေါ်ဆိုမှုများနှင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ် Huffington Post မှကုန်သွယ်မှုရှိစာအုပ်များအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်တောင်းဆိုခြင်းပင်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ဒါကအတော်လေးအနည်းငယ်ရောင်းအားဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြနိုင်!
ခေါ်ဆိုရန် - မစ္စတာဝီတိုонသည်သူ၏ Huffington Post ဇီဝရုပ်သံအစီအစဉ်အတွင်းလူလူချင်းပြောဆိုရန်အခွင့်အလမ်းများအတွက်မစ္စတာဝီတိုအားစာရင်းသွင်းရန်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ စကားပြောခြင်းသည်မစ္စတာဝီတိုကဲ့သို့ကျော်ကြားမှုအဆင့်ရှိသူများအတွက်ဝင်ငွေကောင်းသောဝင်ငွေဖြစ်သည်။
HuffPo ဖြစ်ရပ်များ - HuffPost Live နှင့်အတူ Huffington Post သည်ဒေသဆိုင်ရာနှင့်အမျိုးသားရေးအခမ်းအနားများကိုလည်းအားပေးထောက်ခံခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်များတွင်မစ္စတာဝီတိုကငွေပေးချေသည့်ကျော်ကြားသောပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဖြစ်ရန်ညှိနှိုင်း။ ရနိုင်ပြီးစာအုပ်တစ်အုပ်စီနှင့်ပင်လက်မှတ်ထိုးနိုင်သည်။
အဓိကအချက်ကတော့မစ္စတာဝီတိုကအလွယ်တကူရနိုင်တယ်ဆိုတာငါယုံကြည်တယ် အမြတ်ထုတ် HuffPo လိုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကသူကိုအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ထိုဝင်ငွေကငှားပေးဆောင်!
ငါရေးတယ် အခမဲ့ ငါ့ site ပေါ်တွင်အကြောင်းအရာငါရေးလိုက် အခမဲ့ ငါသူတို့ပရိသတ်နှင့်ထိတွေ့ဆက်ဆံရန်ဆန္ဒရှိသောအခြားဆိုဒ်များအတွက်အကြောင်းအရာ, ငါအဘို့အပြောပါ အခမဲ့ ငါနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ဆန္ဒရှိသောဖြစ်ရပ်များမှာဖြစ်ရပ်များမှာ။ ဟုတ်ပါတယ်ငါလည်းရေးပါ paid ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များအတွက်အကြောင်းအရာနှင့်ငါဖြစ်၏ paid အခြားဖြစ်ရပ်များမှာပြောဆိုရန်။ တခါတရံမှာငါတို့ထုတ်ဝေတာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အတွက်အမျိုးသားရေးအခမ်းအနားတစ်ခုသို့တောင်ငါတို့လမ်းပေးကြသည်။ တစ်နည်းပြောရရင်တစ်ခါတစ်ရံမှာဒီအဖြစ်အပျက်တွေမှာပရိသတ်ကိုရောက်ဖို့ပဲပေးရတယ်။
အခွင့်အလမ်းတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်ုပ်တို့ထိတွေ့ခြင်းမှမည်ကဲ့သို့အကျိုးကျေးဇူးရရှိနိုင်သည်နှင့်၎င်းနှင့်မည်သူဆက်သွယ်နိုင်သည်ကို အခြေခံ၍ အကဲဖြတ်သည်။ ငါတို့ အခမဲ့အလုပ်လုပ်သည် မဟာဗျူဟာသည်ငါတို့အတွက်အလွန်အမြတ်အစွန်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဖြစ်ရပ်တစ်ခု၏ကုန်ကျစရိတ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးသားအမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဘယ်သောအခါမှမရရှိခဲ့သည့်ကန်ထရိုက်စာချုပ်ချုပ်ဆိုရာတွင်ထိရောက်မှုရှိသည်။ အဲဒီအမှတ်တံဆိပ်ကတခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်တွေဆီ ဦး တည်သွားတယ်။ နှင့်အပေါ်နှင့်အပေါ်။
ဒါကြောင့်ငါဘလော့ဂ်ပို့စ်အတွက်ဒေါ်လာရာဂဏန်းလောက်ပေးသင့်တယ်။ ဒါမှမဟုတ်ပရိသတ်နဲ့အတူစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအချို့ကိုပိတ်ပစ်ပြီးဒေါ်လာထောင်သောင်းချီပြီးကန်ဒေါ်လာရာထောင်ချီ။ ရိတ်သိမ်းနိုင်တယ်။ ငါဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာအခုသင်သိပြီ အခမဲ့.
တကယ်တော့ကျွန်တော်ဟာအခမဲ့အလုပ်လုပ်ရုံသာမက ငါမကြာခဏအခမဲ့အလုပ်လုပ်ရန်ပေးဆောင်! Dittoe PR နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိချင်သောပစ်မှတ်ထားသက်ဆိုင်ရာပရိသတ်များရှာဖွေခြင်းအတွက်အကြီးအကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့သည်။ မှာပါရမီအသင်း Dittoe PR ဒီအခွင့်အလမ်းတွေပေးဖို့ကျွန်တော့်ရဲ့အရည်အချင်းကိုအဲဒီ့စာပေတွေဆီကိုချလိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုဆက်နွယ်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုဆက်လက်ရိတ်သိမ်းသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အခြားမည်သည့်အခါကမျှတွေ့ဆုံခဲ့ခြင်းမရှိသောပရိသတ်များအတွက်ကုမ္ပဏီများအတွက်အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
သင် ... လုပ်ပါသလား အစဉ် လူတွေကိုလခမရရင်ကူညီပေးမလား။ အမှိုက်သရိုက်တွေအမှိုက်သိမ်းပြီးအမှိုက်ပစ်လိုက်သလား။ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်သူကိုအစားအစာအတွက်ငွေပေးဖူးပါသလား။ ဘာလို့အဲဒီလိုလုပ်တာလဲ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစိုးရအရာရှိတွေကိုလမ်းတွေကိုသန့်ရှင်းအောင်ထားဖို့နဲ့ကံမကောင်းတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့ငွေအမြောက်အမြားပေးရပါတယ်။ ဒါကိုသနားကြင်နာလို့ပဲ။
လူတွေကဘာကိုမှမပေးရင်သူတို့ဘာမှမလုပ်တဲ့ကမ္ဘာမှာငါမနေချင်ဘူး။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်ယောက်အနေနှင့်ကျွန်ုပ်သည်ဤသို့သောသဘောထားမျိုးရှိပါကကျွန်ုပ်သည်စီးပွားရေးမှထွက်ခွာသွားလိမ့်မည်ဟုငါအာမခံနိုင်သည်။ ငါ၌ဤကဲ့သို့သောအဝေးမှအမြင်မျိုးရှိသောငါ့သူငယ်ချင်းများစွာရှိသည်။ ထို့နောက်သူတို့၏စီးပွားရေးသည်ဘယ်သောအခါမျှကြီးထွားလာခြင်းမရှိသည့်သူတို့၏စိတ်ပျက်စရာများကိုကြားရသည်။ ငါယုံကြည်တယ် ပထမ ဦး ဆုံးလူတွေကိုကူညီခြင်း ငါ၏အစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးထွားလာ၏အကြီးမြတ်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါတစ်ယောက်ယောက်ကိုအခမဲ့ကူညီပေးမယ်ဆိုရင်သူတို့ကငါ့စီးပွားရေးကိုလခပေးတဲ့ဖောက်သည်တွေဆီမကြာခဏရည်ညွှန်းတယ်။
မစ္စတာဝီတို၏ကိုယ်ကျင့်တရားကိုကျွန်ုပ်မေးခွန်းထုတ်နေခြင်းမဟုတ်ပါ။ အကျိုးအမြတ်မယူသောကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ကုန်သွယ်ရေးတွင်သူတို့၏စွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေးရန်တောင်းဆိုခြင်းဖြင့်တစ်စုံတစ်ယောက်အားအမြတ်ထုတ်နေသည်ဟူသောအယူအဆကိုကျွန်ုပ်မေးခွန်းထုတ်သည်။ မစ္စတာဝီတိုက Huffington Post တွင်သူတို့ရပ်ရွာကိုတည်ဆောက်ရာ၌ကြီးမားသောစွန့်စားမှုနှင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများရှိသော်လည်းငွေရှိသလားဟူသောအချက်ကိုအမြတ်ထုတ်နေပါသလား။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ထုတ်ဝေမှုတွေကိုထိန်းသိမ်းပြီးမြှင့်တင်ရေးအတွက်ဆက်ပြီးငွေပေးနေကြတယ်၊ အဲဒါကိုဘာကြောင့်လျစ်လျူရှုထားတာလဲ။
ငါစာဖတ်နေတယ် အဆိုပါသို့အနည်းငယ်ကွေ့ Edge အခုအချိန်မှာဂျက်ဖ် Olson နှင့်သူ၏နှိုင်းယှဉ်ခြင်းအားဖြင့်လယ်သမားတစ် ဦး ၏ဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးထွက်စိုက်ပါ၊ စိုက်ပျိုးပါ၊ လယ်သမားတစ် ဦး သည်မျိုးစေ့စိုက်ရန်အခမပေးသော်လည်း၊ ထိုမျိုးစေ့ကိုဂရုတစိုက်စိုက်ပျိုးပြီးလုပ်အားမှရသည့်အခကိုသာရရှိသည်။ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည့်နေရာတိုင်းတွင်မျိုးစေ့ကြဲရန်လူတိုင်းကိုကျွန်ုပ်တိုက်တွန်းလိုပါသည်။
ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကီဗင် Mullett နဲ့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းပြောမယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့လာမယ့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေး Cage ပွဲစဉ်အတွက် Blab! မင်းကိုငါတို့လာနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်
Tags: huffington ပို့စ်ပေးဆောင်အကြောင်းအရာမရတဲ့အကြောင်းအရာwheaton လိုချင်တယ်
နိုဝင်ဘာလ2ရက် 2015 ခုနှစ် ညနေ 9:26 နာရီ
သဘောတူတယ်။ ထိတွေ့မှုသည် ၎င်းတို့၏အချိန်နှင့် ကြိုးစားအားထုတ်မှုအတွက် လျော်ကြေးပေးမည်ဟု ခံစားရကြောင်း စာရေးသူက ဆုံးဖြတ်ရန်သာ ရှိသည်။ စာရေးဆရာ ခရက်ဒစ်မရရှိဘဲ (၆ဆင့်/စကားလုံး ၆ ဆင့်နှုန်းဖြင့်) အလွတ်စာရေးဆရာများကို အလွတ်ရေးခိုင်းခြင်းနှင့် မတူပါ။ (ဒါ့အပြင် အဲဒီစာရေးဆရာတွေဟာ လစာအလွန်နည်းတာကို ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းထားပါတယ်။)
အဆုံးစွန်သောတန်ဖိုး၏အပေးအယူတစ်ခုရှိသည်နှင့်ထိုမျဉ်းသည်အချိန်နှင့်အမျှထုတ်ဝေခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲလိမ့်မည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလွတ်စာရေးဆရာတစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်လုပ်တာတောင်မှ အထက်တန်းအဆင့်တစ်ခုရှိတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်- အလုပ်က ပိုငြီးငွေ့လာလေလေ၊ အသိအမှတ်ပြုမှုနည်းလေလေ လစာပိုမြင့်လေပါပဲ။ ဒါကြောင့် နည်းပညာလက်စွဲစာအုပ်တွေ ရေးရတာ တော်တော်အဆင်ပြေပါတယ်။ ရသစာပေ ရေးခြင်းသည် မကြာခဏ ပေးဆပ်ခြင်း ဖြင့် အဆုံးသတ်သော်လည်း စာရေးဆရာအတွက် လေးလေးနက်နက် စိတ်ကျေနပ်မှု ရနိုင်သေးသည်။
3:2015 pm မှာနိုဝင်ဘာ 12, 19
ငွေတန်ဖိုးကို တိုင်းတာခြင်းဟု ကျွန်တော် ငြင်းခုံနေသေးသည်။ စကားလုံးတစ်လုံးလျှင်6ဆင့် သို့မဟုတ် အဲသည်နှင့် နီးစပ်သော အလွတ်တန်းစား လူငယ်များသည် ကိုယ်ရေးရာဇဝင်တစ်ခုကို တည်ဆောက်ပြီး ၎င်းတို့၏ လက်ရာကို ဂုဏ်ပြုကြသည်။ ငယ်ငယ်က ပရော်ဖက်ရှင်နယ် တုန်းကလည်း ပိုက်ဆံပြန်မရှာဘူး။ မင်းရဲ့လက်မှုပညာကို ကောင်းကောင်းအသုံးချပြီး ပိုတန်ဖိုးရှိလာတယ်။ ဒီဇိုင်နာတွေကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ဆက်ဆံပြီး ဆိုးရွားတဲ့ အခကြေးငွေတွေရခဲ့တဲ့ သတင်းစာမှာ ကျွန်တော် အလုပ်လုပ်ဖူးပေမယ့် အခွင့်အလမ်းက သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးနိုင်စွမ်း၊ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားနဲ့ ကျောင်းမှာ တစ်ခါမှ မထိတွေ့ဖူးတဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေကို လေ့ကျင့်ဖို့ သင်ပေးခဲ့တယ်။ ထိုအရည်အချင်းများသည် လုပ်ငန်းခွင်တွင် ပိုမိုယှဉ်ပြိုင်နိုင်စေပြီး မယုံနိုင်စရာ အလုပ်များကို ရှာဖွေနိုင်ခဲ့ကြသည်။
ယနေ့သင်ငွေမရရှိခြင်းကြောင့်သာ သင်တန်ဖိုးမတည်ဆောက်ဘဲ ထိုတန်ဖိုးကို နောက်ပိုင်းတွင်ပေးချေရမည်ဟု မဆိုလိုပါ။